Sasana Moli - International Burmese Monks Organization: ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏ သြ၀ၝဒ
ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏ သြ၀ၝဒ
ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏ုသ၀ၝဒ
၂၀၀၇ိုိံဝင်ဘာ ၁၂ ရက်
ဘုန်ုးကီးသည် ၁၉၅၇ ခုနစြ်၊ူမန်မာူပည်မြ ထက်ြခြာခဲူ့ပီး ဓမ္ထဒူတသာသနာူပြ ပညာရပ်မဵား သင်ုကားနေရင်း သာသနာူပြ လုပ်ငန်းရပ်မဵားကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရက်ြခဲ့ပၝသည်။ ၁၉၆၂ ခိုံစ်ြတငြ်ူမန်မာူပည်ကို စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းသြားသော သတင်းကိုကားရသောေုကာင့် လန်ြစြာ စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ပၝသည်။
ဒၝပေမဲ့ တနေႚ ကောင်းနိုး ကောင်းနိုး နငြ့် မြေဵာ်ကိုးနေခဲ့ရာမြ ပိုမို ဆိုးရြားလာတာကိုမင်တြေ့ ရသူဖင့် မြေဵာ်လင့်ခဵက်ကင်းမဲ့လာ၍ တေဝြေနေစဉ် လန်ြခဲ့သည့် ၂၀၀၇ခိုံစြ် စက်တင်ဘာလ အရေးအခင်းမဵားတငြ် အူပစ်မရြိ လက်နက်မဲ့ ရဟန်းတော်မဵာိးံငြ့် ကေဵာင်းသားကေဵာင်းသူပည်သူအမဵားတို့ အာြးိံပ်စက်ညဉြ်းပန်း ထောင်ခဵသတ်ူဖတ်ူခင်းမဵားကိုမင်တြေ့ ရသောအခၝ လန်ြစြာမပြင် စိတ်မခဵမ်းမသာူဖစ်နေခဲ့ပၝသည်။ (Photo - RFA)
ူမန်မာူပည်တငြ် ရဟန်းရင်ြလူပည်သူအမဵားတို့ အား နေ့ ရောညပၝ လိုက်လံရြာဖြေ ဖမ်းဆီူးပီြးိံပ်စက်ညဉြ်းပန်း ထောင်ခဵ သတ်ူဖတ်ူခင်းအမမြဵားကို နေ့ စဉ်နငြ့်အမြဵူပလြုပ်နေသောေုကာင့် အမဵာူးပည်သူတို့ မြာ အူမဲထိတ်လန့်စိုးရိမ် နေုကရလြဵက် အားကိုးရာမဲ့ဘ၀သို့ရောက်နေုကရပၝသည်။
ထိုစဉ်အခၝူမန်မာူပည်တငြ်းမြ ရဟန်းရင်ြလူပည်သူတိုႚကူပည်ပရောက် သာသနာူပဆြရာတော်တိုႚအား “သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖြဲႚအစည်းတခု ဖြဲႚစည်းတည်ထောင်လဵက် တပည့်တော်တိုႚကို ကယ်ယူတော်မူုကပၝ … ” ဟူ၍ အားကိုးတုကီး ပန်ုကား လြေဵာက်ထာုးကရြာပၝသည်။
ထိုစဉ် ဘုန်ုးကီး စဉ်းစားမိသည်မြာ “အရင်းဆုံးရင် တကယ်ူမတ် တယ်လိုႚ မဆိုသင့်” ဟူ၍ူဖစ်ပၝသည်။
ဆိုလိုသည်မြာ ဘုန်ုးကီးတိုႚအနေူဖင့် အားထုတ် ဆောင်ရကြ်ုက၍ နိုင်ငူံခားသာသနာူပလြုပ်ငန်းမဵား အောင်ူမင်ပၝသော်လည်း အရင်းမူလူဖစ်သောူမန်မာူပည်၏ သာသနာရေးကား မရေမရာူဖစ်နေပၝလြဵင် တကယ်အောင်ူမင်သည်၊ူမတ်သည်ဟူ၍ မဆိုနိုင်ဘဲ အရင်ရြံးနေသလိုဖစ်နေူပီ ဟု ဆင်ူခင်စဉ်းစားဖယြ်ူဖစ်နေပၝသည်။
ူပည်ထောင်စုမန်မာနိုင်ငံတော်၌ အဆက်ဆက်သော စစ်အာဏာရင်ြတခဵြိႚ၏ ရက်စက်ုကမ်ုးကတ် ယုတ်မာမြ အမဵြိးမဵြိးတို့ေုကာင့်ူပည်ထောင်စုမန်မာူပည်သူပည်သားတို့ မြာ လန်ြခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုနစ်ြမြ စတင်၍ ၂၀၀၇ခိုံစ်ြအထိ၊ ၄၅ိံစြ် ကာလပတ်လုံး “ခေတ်သစ် ကပ်သုံးပၝး” လို့ခေၞတဲ့ ဒုက္ခမဵြိးစုံ အဖုံဖုံကို ယူကဵြံးမရ တြေႚုကြုံကရူပီး လူတိုင်းလိုလိုပင် ဆင်းရဲဒုက္ခတြေ ပင်လယ်ဝေလဵက် မရမြလြ ခၝးသီးစြာ ခုံကရပၝသည်။
ခေတ်သစ် ကပ်သုံးပၝးတို့ အနက် -
ဒုဗ္တိကိံ္ဇရကပ် ဆိုသည်မြာကား - စီးပြားရေ စီမံကိန်းစနစ် ညံ့ဖဵင်းမတြိုေုကာင့်ူပည်သူမဵားအဖို့ စားဝတ်နေရေး စသည်တို့ မြာ မူပည့်မစုံ မလုံလောက်မတြေနြငြ့် နေ့ စဉ်နငြ့်အမ္တွ ရင်ဆိုင်နေရူခင်း။
ရောဂိံ္ဇရကပ် ဆိုသည်မြာ - ဆေးဝၝးတြေ မူပည့်မစုံဖစ်နေသောေုကာင့် ရောဂၝမဵားကို မကာကယြ်ိုံင်ဘဲ မူဖစ်သင့် သော ရောဂၝသစ်မဵာူးဖစ်ပြာူးခင်း၊ူဖစ်ူပီးသား ရောဂၝဟောင်းမဵားကိုလည်း မကုသိုံင်ူခင်း။
သတ္ဇိံ္ဇရကပ် ဆိုသည်မြာကား - ရာထူးနငြ့် တံစိုးလက်ဆောင်မဵာူးဖင့်ူဖားယောင်း၍ သံဃာတော်အခဵင်းခဵင်း၊ ကေဵာင်းသာူးပည်သူတို့ အခဵင်းခဵင်း အိမ်ုကက်ခဵင်း အိုးမည်းသုတ်၍ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် ရောင်စုံစက်ြကာ နေႚ စဉ်နငြ့်အမ္တွ သြေးထိုးရန် တိုက်ပေးသောေုကာင့် အခဵင်းခဵင်း သြေးကြဲရန်ခိုက်မမြဵာူးဖစ်ူခင်းဟူ၍ ခေတ်သစ်ကပ်သုံးပၝး ဆိုက်ရောက် လဵက်ရြိနေပေသည်။
ဘုန်ုးကီးတို့အထူးသတိပေးလိုသည်မြာူပည်သူမဵားအခဵင်းခဵင်း၊ သြေးကြဲ ခိုက်ရန် မူဖစ်ပြားရေးပင်ူဖစ်သည်။
ယင်းသို့ သော ခေတ်သစ် ကပ်သုံးပၝးတို့ မြ ကေဵာ်နင်း လတြ်ေူမာက်သြားရန် ဗုဒ္ဌူမတ်စြာ၏ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆရာဒကာတိုႚညီညီညာညာ အူမဲ လက်တြဲ ပူးပေၝင်ုးကလဵက် တညီတညတ်ြတည်း ဆောင်ရက်ြလုပ်ကိုင် သြာုးကပၝစို့ ။
ကမ္တာသူကမ္တာသားတိုႚ အကဵြိးစီးပြားနငြ့်ခဵမ်းသာသုခတိုႚ ရရြိရေးအတကြ် ဆောင်ရကြ်ူခင်းပင်ူဖစ်သည်။
ယင်းသိုႚ ဆောင်ရကြ် မသြာူမတ်စြာဗုဒ္ဌ၏သာသနာတော်ူမတ်ုကီး အဓနြ်ႚရည်ြစြာ စည်ပင်ူပန်ႚပြားမည်ူဖစ်ေုကာင်း ပန်ုကားသိစေအပ်ပၝသည်။
ူမတ်စြာဘုရား၏ သာသနာတော်ူမတ်ုကီး အဓနြ့် ရည်ြစြာ စည်ပင်ူပန့် ပြားဘို့ တည်ဆောက်ပုံမြာ-
သာဂၝရာ အနာဂၝရာစ၊ ဥဘော အညော ည နိင်္ိံတာ၊
အာရာဓ သဒ္ဌမ္ထံ၊ ယောဂက္ခေမ မနူတ္ဇရံ။
(၁) ရဟန်းယောက်ဵား (၂) ရဟန်းမိန်းမ (၃) ဒၝယကာယောက်ဵား (၄) ဒၝယိကာမအမဵြိးသမီး၊ ၄င်းတိုႚလေးဦး အခဵင်းခဵင်း မိမိတို့အပေၞ ကဵရောက်လာသော တာဝန်ဝတ္ဇရားမဵားကို မနြ်ူမတ်သော စိတ်ထားတိုႚူဖင့် ပူးပေၝင်းလက်တြဲူပီး အူမဲတစေ ဆောင်ုကည်းသြားပၝက မိမိတိုႚမ္တွော်မနြ်းထားသော လောကီလောကုတ္ဇရာ ပန်းတိုင်သိုႚ ဧကန်မုခဵ ရောက်ုကမည်ကို ဗုဒ္ဌူမတ်စြာ ဟောုကားမိန့်တော်မူ၏။
ဗုဒ္ဌ၀ၝဒအရ အသက်မြေးဝမ်းကေဵာင်ူးဖစ်သော အလုပ်အကိုင် မတူခားနာုးကသော်လည်း ရတနာသုံးပၝးကို ဆည်းကပ်ကိုးကယြ် ယုံကည်ုကသူမဵားကို ဥပၝသကာ၊ ဥပၝသီကာမဵားဟူ၍သာ အသိအမတြ်ူပြုကပၝသည်။ ခြဲူခားမမြရြိုကပၝ။
အဟံ ၀ိံ္ဋာမိ ရတ္ဇနတ္ဇယံ
ရတနတ္ဇ အာနူ ဘာဝေန၊ ဟောတုမေ ဇယမဂဿလံ။
အဟံဝိံ္ဋာမိ ယနေ့ ကဵရောက်ရာ မဂဿလာအခဵိန်ခၝ၌ လာရောက်ုကသော အကြဵိုံ်ပ်သည် ရတ္ဇနတ္ဇယံ၊ ဘုရားတရား သံဃာဟုဆိုအပ်သော ရတနာသုံးပၝးကို ၀ိံ္ဋာမိ ရိုသေူမတ်ိုိံး လက်စုံမိုး၍ ရြိခိုးကန်တော့ပၝ၏ အရငြ်ူမတ်ဘုရား။ ရတနတ္ဇ ယိာုံဘာဝေန၊ ရတနာသုံးပၝး၏ ကေဵးဇူးတော်ေုကာင့် မေ၊ အမြာကံ အကြဵိုံ်ပ်အား ဇယမဂဿလံ အောင်ရာအောင်ေုကာင်း မဂဿလာအပေၝင်းသည် ဟောတု၊ မုခဵမသြေူဖစ်ပၝစေသတည်း။
Posted by MoeMaKha at 10:47 AM
Labels: Speech and Talk
မဂ္ဂင်ကျောင်းတိုက်ကို စစ်အာဏာရှင်များ ချိတ်ပိတ်ခြင်...
သာသနာ့မောဠိ အဖွဲ့ချုပ်က ဆရာတော် ၄၉ ပါး ချီးမြှင့်သ...
သာသနာ့မောဠိ အဖွဲ့ချုပ် (ယူကေ) ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ကြေ...
သာသနာ့မောဠိ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးပညာဝံသ၏ သြ၀ါဒပေး တရားတေ...
PRESS RELEASE - 2/2007 - Sasana Moli’s Patron Saya...
သာသနာ့မောဠိ ပဓာနစေရ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ ၏ အမေရိကန် အ...
သာသနာ့မောဠိအဖွဲ့ချုပ်က နအဖ၏ ပထမပြန် နှင့် ဓမ္မစရိယ ...
U Koviada of Sasana Moli to visit Fort Wayne
နယူးယောက်တွင် သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ချုပ် သြ၀ါဒ တရားပ...
About ASHIN NAYAKA , General Secretary of Sasana M...
Cry, Beloved Burma by - U Gambira and Ashin Nayaka...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ် (ကေ...
ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးပညာဝံသအား တွေ့ဆုံ လျှောက်...
University of San Francisco to hornor Burmese Budd...
Honorary degree from University of San Francisco b...
သာသနာ့ဥသျှောင် ပဓာနစေရ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ
Burmese Junta and cronies trying to divide Sasana ...
ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းကြီးမှ သာသနာ့ဥသျှေ...
Burmese Monks in Sirilinka in solidarity with Sasa...
Burmese in Thai in solidarity with Sasana Moli
Burmese in Singapore in solidarity with Sasana Mol...
Burmese in New York in solidarity with Sasana Moli...
Burmese Monks in Australia in solidarity with Sasa...
Burmese Monks in Singapore support Sasana Moli
Issued by the Overseas Elderly Writers, Journalist...
List of Monasteries raided by Junta as of 6th Oct ...
Statement & Principle of SASANA MOLI
Statement & Principle of SASANA MOLI announced
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ချုပ် - အမေရိကန် အရှေ့ပိုင်း န...
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ချုပ် - ဖွဲ့စည်းပုံ ကြေညာချက် ...
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ချုပ် - မေတ္တာရပ်ခံချက် ပက - ၁/...
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ချုပ် - ကြေညာချက် ၁/ ၂၀၀၇
သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ကြီး စတင်သည့်နေ့ အစည်းအဝေး မြင်...
သာသနာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ချုပ် စတင်ဖွဲ့စည်း